Shiinaha API 600 Gate Valve Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha. Wadada wararka
Shaqooyinka muhiimka ah: API 600, Gate, Madax, OS&Y, Bolted, Bonnet, Flange, WCB, CF8, CF8M, C95800, Class 150, 300, 2500, 4A, 5A, 6A SOO SAARKA SOO SAARKA: Qiyaasaha: NPS 2 ilaa NPS 60 Cadaadiska Range : Fasalka 150 illaa Fasalka 2500 Xiriirinta Flange: RF, FF, Qalabka RTJ: Tartanka: (A216 WCB, A351 CF3, CF8, CF3M, CF8M, A995 4A, 5A, A352 LCB, LCC, LC2) Monel, Inconel, Hastelloy, UB6 HEERKA Naqshadeynta & soosaarida API600 Waji-ka-waji ASME B16.10 Dhammaadka Xiriirka ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44 (NPS 22 Kaliya) - ...
Shaqooyinka muhiimka ah: API 600, Gate, Madax, OS&Y, Bolted, Bonnet, Flange, WCB, CF8, CF8M, C95800, Class 150, 300, 2500, 4A, 5A, 6A
Qiyaaso: NPS 2 ilaa NPS 60
Xiriirinta Flange: RF, FF, RTJ
Naqshadeynta & soosaarka API600
1. Boore buuxa ama la dhimay
2. RF, RTJ, ama BW
3. Dibedda Furimaha & harqoodka (OS&Y), kor u kaca
4 Bonnet Bonnet ama Cadaadis Cadaadis Bonnet
5.Flexible ama adag Wedge
6. Faraantiyada kursiga dib loo cusboonaysiin karo
API 600 Gate Valve waa naqshad albaabka waalka marka loo eego heerka API 600, istaandarka API 600 waa istaandarka Machadka Batroolka Mareykanka. Caadi ahaan waxay qaadataa irrid kaliya, ama albaab adag oo adag ama qaab dhismeedka iridda jilicsan.
Astaamaha qaabdhismeedka API600 Gate Valve
1. Naqshadeynta wax soo saarka iyo soo saaristu waxay buuxinayaan shuruudaha heerarka horumarsan, oo leh daboolid lagu kalsoonaan karo iyo waxqabad aad u fiican.
2. Qaabdhismeedka qaab dhismeedka ayaa is haysta oo macquul ah, muuqaalkuna waa qurux badan yahay.
3. Waxay qaadataa qaab-dhismeedka albaabka laastikada ah, oo leh wareegyo wareegsan oo dhexroor iyo dhexdhexaad ah, taas oo sahlaysa in la furo oo la xiro.
4. Jirka waalka wuxuu leeyahay qalab kala duwan oo dhameystiran, xirxirida iyo goomaha ayaa si macquul ah loogu xushay iyadoo loo eegayo xaaladaha shaqada ee dhabta ah ama shuruudaha isticmaalaha, taas oo lagu dabaqi karo cadaadis kala duwan, heer kul iyo xaalado shaqo oo dhexdhexaad ah
5. Qaado noocyo kala duwan oo heerarka flange-ga ee gudaha iyo dibedda iyo noocyada dusha sare ee daboolka si loo daboolo baahiyaha injineernimada iyo shuruudaha isticmaalaha.
Rakibaadda API 600 iridda waalka:
1. Hubi gudaha daloolka waalka iyo dusha sare ee daboolka ka hor inta aan la rakibin, oo wasakhda ama walxaha ciidda ah looma oggola inay raacaan;
2. Booliyaasha qayb kasta oo isku xidhka ah si siman ayaa loo adkaynayaa;
3. Hubi qaybaha wax lagu duubo in si adag loo cadaadiyo, ma aha oo kaliya inaad hubiso cidhiidhiga xirxirida, laakiin sidoo kale inaad hubiso furitaanka dabacsan ee iridda;
4. Kahor intaadan rakibin wiishka, isticmaaluhu waa inuu hubiyaa nooca waalka, cabirka iskuxirka isla markaana fiiro gaar ah u yeeshaa jihada socodka ee dhexdhexaadka si loo hubiyo joogteynta shuruudaha waalka;
5. Marka la rakibayo waalka, isticmaaluhu waa inuu keydiyaa booska lagama maarmaanka u ah wadista waalka;
6. Fiilooyinka qalabka wadista waa in lagu fuliyaa sida ku xusan jaantuska xargaha;
7. Waalka API 600 ee waalka waa in si joogto ah loo ilaaliyaa, shil ama is riixisna looma oggola inuu ka fogaado inuu wax yeeleeyo shaabadda.
Hore: API 599 Plug Madax
Xiga: Bonnet bolnet been abuur ah Gate Madax
Api600 Gate Madax
Tuur Steel Gate Madax
Flange Gate Madax
Wcb Gate Madax
Flanged Gate Madax
Ahama Steel Gate Madax
Slab Gate Madax
Polyurethane Knife Gate Madax
API 600 Cast Steel Gate Madax